I-WordPress: Inkcazo yeMeta yeDynamic kwiPosi nganye | Martech Zone
I-WordPress: Inkcazo yeMeta eDyalayo kwiPosi nganye
NgoMvulo, Julayi 2, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Isihloko sakho esingagqibekanga seWordPress sichaza inkcazo enye yalo naliphi na iphepha lesiza sakho, ngaphandle kwephepha umntu athe wangena kulo evela kwinjini yokukhangela. Ukuba inkcazo kwi-injini yokukhangela ayinakuyichaza iposti ekwibhlog inokubangela abantu abancinci bacofe kwikhonkco lakho.
Andizange ndicinge ngale nto kude kube yile mpelaveki xa ndafumana uphononongo olulandelayo lwendawo yam yiBlogStorm:
Kuhle, kulula ukudibanisa isilingo! Zama ukongeza amaqhosha ebhukumaka ezentlalo emazantsi ezithuba zakho kunye neenkcazo ezizodwa zemeta kwiphepha ngalinye.
Ukwenza imali ngebhlog enje kunzima, ukuba uzama yonke into UJohn Chow Uzamile emva koko uya kuba kwindlela elungileyo.
Ngomcabango othile kunye nokunxibelelana okuninzi kwekhonkco uya kuba nakho ukufumana amakhonkco aneleyo ukuze ubekwe kwinqanaba elifanelekileyo (mhlawumbi sele ulwenzile). Nje ukuba ubeke le migaqo ungancamathisela amakhonkco onxibelelwano kunye neAdsense kumaphepha kwaye uvune inzuzo.
Ukufumana indawo yakho ehlaziyiweyo yinto emnandi kuba iya kuhlala ichonga umba othile kwindawo yakho ongayihoyanga. Kule meko, yinkcazo yemeta yam nganye kwizithuba zam. Iinkcazo zeMeta zisetyenziswa ziinjini yokukhangela ukufaka inkcazo emfutshane yephepha elidweliswe kwiziphumo. Kuba abantu baya kubona amaphepha ahlukeneyo xa bekukhangela, kutheni ungasebenzisi iinkcazo ezahlukeneyo zeemeta kwiphepha ngalinye lakho?
Sele ndiyilungisile i-header ukuze ndibandakanye amagama aphambili ashukumisayo kwigama lam eliphambili meta tag kwaye iye yanceda ukuphucula amanqanaba ezinye zezithuba zam. Ukufaka isicelo kwiinkcazo ezahlukeneyo akunakunyusa ukubekwa kwam kwindawo yokukhangela, kodwa njengoko iBlogStorm ibonisa - inokukhokelela kunxibelelwano ngakumbi namaphepha am kwiziphumo zokukhangela kwabantu.
Ukuba iphepha elikwisiza sam liphepha elinye, njengaxa ucofa indawo enye, ufuna isicatshulwa sephepha. Ndifuna ukuba isicatshulwa sibe ngamagama okuqala angama-20 ukuya kuma-25 eposti kodwa ndifuna ukucoca nayiphi na i-HTML. Ngethamsanqa, WordPress unomsebenzi oza kundinika into endiyifunayo, i_isicatshulwa_s. Nangona yayingenzelwanga olu setyenziso, yindlela enobuchule yokusebenzisa umda wegama kwaye ukhuphe zonke izinto ze-HTML!
Ndingathatha eli nyathelo ukuqhubekeka kwaye ndisebenzise Inkcazo yokuzikhethela ngaphakathi kwiWordPress ukugcwalisa inkcazo yemeta, kodwa okwangoku le yindlela emfutshane ecocekileyo! (Ukuba usebenzisa le ndlela kwaye ufake iSicatshulwa esinganyanzelekanga, iya kuyisebenzisa loo nkcazo kwiNkcazo yeMeta).
Lo msebenzi ufuna ukuba uwubize ngaphakathi kweLoop, ke kukho ubunzima kuwo:
PHAWULA: Qiniseka ukuba uyayitshintsha "Inkcazo yam emiselweyo" ngayo nantoni na onayo ngoku okanye ongathanda ukuba yinkcazo yebhlog yakho.
Le nto yenziwa yile khowudi inika inkcazo yemeta engagqibekanga yebhlog yakho naphi na kodwa kwiphepha elinye lePosti, kwimeko apho ithatha amagama angama-20 okuqala kwaye ikhuphe yonke i-HTML kuyo. Ndiza kuqhubeka nokucoca ikhowudi (ndisusa imigca) kwaye kubandakanya 'ukuba ingxelo' ukuba kukho iSicatshulwa esinganyanzelekanga. Hla umamele!
tags: Inkcazo yemeta eguqukayoinkcazo yemetaSEOWordPress
Isicatshulwa seNtengiso yeNtengiso yeAdsense kaGoogle (kwibhlog yam)
NgoJulayi 2, 2007 ngo-4:16 PM
Lo umhle uDoug. Enkoso ngokwabelana!
NgoJulayi 2, 2007 ngo-5:10 PM
Umhle Doug, ndijonge phambili ekuboneni le nkqubela phambili. Owam ngumsebenzi we-botch okwangoku (ndicinga), ngoko ke ndiyavuya ukubona omnye umntu esenza umsebenzi onzima!
NgoJulayi 2, 2007 ngo-8:25 PM
Inqaku elinye-ndiyihlaziyile isithuba kuba bendicinga ukuba kufuneka wenze ingqiqo ukuba kukho umntu osebenzise “Isicatshulwa esiKhethekileyo” eposini. Nangona kunjalo, awunyanzelekanga ukuba wenze njalo – iSicatshulwa esiKhethekileyo siyakuboniswa ngokuzenzekelayo ukuba siyasetyenziswa… elinye uphawu oluhle lwe-excerpt kunye ne_excerpt_rss imisebenzi.
Jul 3, 2007 ngo-7: 10 AM
Hahaha...! Ngenene ufuna ukubetha uJohn Chow, akunjalo? ^^ Kuhle!
Jul 3, 2007 ngo-7: 30 AM
Ukwenza ngaphezulu kwe-10k yeedola ngenyanga kwibhlog yam kuya kuba kuhle! Nangona kunjalo, uJohn ('umhlobo wokwenene' nomntu endimhlonela ngokumangalisayo) utyala imali eninzi ekunikeleni ingqalelo. Usanda kungena engxakini nguGoogle kunye neTechnorati- ezi zinokumlimaza kakhulu ngengeniso yakhe kwixesha elizayo.
Kodwa ndiyayixabisa into yokuba abafana abanjengaye banazo iicahonies zokutyhala umda - uJohn wazisa abafana abafana nam ukuba uphi umgca!
NgoJulayi 3, 2007 ngo-11:15 PM
Ukulandelela nje, ndiye ndayifumana yonke kwi-One SEO Pack WordPress Plugin oko kuya kukwenzela oku!
Ndiza kutsala enye yekhowudi yam kule veki kwaye ndiphumeze le plugin endaweni yokugcina izinto zicocekile. QAPHELA: Ifunyenwe kwi Iblogi kaJohn Chow.
Jul 4, 2007 ngo-11: 32 AM
Kuthekani ngokubandakanya amagama odidi kunye negama lebhlog kwisithuba ngasinye…. ngaba oku kuyaphucuka kwizinto ze-SEO? Ndicinga njalo!
Juni 17, 2008 ngo-2: 53 PM
Ukuba usebenzisa i-YAPB njengesisombululo sakho somfanekiso, le khowudi iya kutsala umfanekiso wakho okhokelayo kwi-meta kwaye uyibonise ngaphezulu komzimba xa ujonge isiphelo sangaphambili.
Nov 27, 2008 ngo-2:19 PM
Enkosi ngekhowudi, nditshintshe "inkcazo yam engagqibekanga" nge